ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: ဘ၀မှာ အချစ်ဆုံး အမျိုးသား
ကျွန်မ သားကြီးက ၇ နှစ်ပါ။ ကျွန်မဟာ အိမ်ထောင်ကျစောတယ်လို့ ပြောတဲ့သူကပြောတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကခုထိ မယူသေးကြဘူးလေ။ တစ်ချို့က အချိန်အခါ သင့်တော်ဆုံးပါလို့ပြောတဲ့သူက ပြောတယ်။
သားကြီးက နူးညံ့တယ်။ ကြင်နာတတ်တယ်။ ကစားမက်တယ်။စိတ်တော့ဆတ်တယ်။ ကျွန်မကိုတော့သိပ်ချစ်တယ်။ သူ့ကို ကဗျာလေးတွေ သီချင်းလေးတွေ ဆိုသိပ်ရင် မျက်ရည်လေးတွေဝဲတတ်တယ်။မင်းသားလေးက လွမ်းရတဲ့အခန်းဆိုရင် မျက်ရည်
ကျွန်မပန်းပင်တွေ ကိုချစ်မှန်းသိတော့သူက ပါ မေမေ့ပန်းပင်တွေဆိုပြီးလိုက်ချစ်တယ်။
ရန်ကုန်မှာရှိရင် ကျွန်မဘုရားရှိခိုးရင်သူက မီးအရမ်းထွန်းပေးချင်တယ်။ ကျွန်မက အိမ်တွင်းအုံးတော်ကို ယပ်ခတ်ရင်သူကပါ အင်္ဂါသားလေးမေမေ တင်္နလာသမီးကိုစောင့်
့်ေ၇ှာက်ပါလို့လိုက်ဆုတောင်းတယ်။ သူ့အဖွားဆုတောင်းတာ မြင်ဖူးတာကိုး။
လိုချင်တာရှိရင် လည်း သားကတော့လိုချင်တာပေါ့နော် မေမေ ..မေမေ အဆင်ပြေမှပါတဲ့. မေမေက မယူနဲ့ဆို ရပါတယ်လို့လည်း ပိုတတ်သေးတာ။
ကျွန်မ ရန်ကုန်ကို ပြန်တုန်းက မေမေ အသက်ကြီးမှ ဘာလို့ကျောင်းတတ်တာလည်း မေမေမရှိရင် သားမဖြစ်ဘူးနော်တဲ့ ကျွန်မ ပြန်ကိုမလာချင်တော့တာ ဒီကို အဲ့တုန်းက။ ...
မြေးဦးမို့ တုန်ကြတယ် ကျွန်မဘက်က ပိုဆိုးတယ်။ သူက ကျွန်မဘက်က အဖွားကိုတော့ အတော်ချစ်တယ်။ သူ့အဖွားနေမကောင်းလို့ ဆိုရင် ဘယ်မှ သိပ်မထွက်ဘူး။ ဖွားဖွားနားမှာနေနေတယ် မေမေလို့ ဖုန်းဆက်တော့ပြောရှာတယ်။ သားက ရွံတာတော့အရမ်းရွံတတ်တယ်။ အိမ်ကို အကူညီပေးမယ့် ကောင်မလေးတွေ ရောက်လာရင်စစချင်းဆို သူက သိပ်အကပ်မခံသလို ထမင်းခူးပေးရင်လည်း ဘာမှမပြောပဲ သူ့အဖွားကိုပဲ ထပ်ခူးခိုင်းတယ်။ ၅ နှစ်သားထဲက ဖုန်းလာရင် ဟယ်လို အမိန့်ရှိပါခင်ဗျာလို့ပြောတတ်တဲ့သားကို ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေကလည်းချစ်ကြတယ်။
သား ၅ နှစ်သားလောက်က ကျောင်းကသူငယ်ချင်းတွေက သူတို့ မေမေတွေကို မားမား၊ပါးပါး ခေါ်တယ်မေမေ. Why I am not တဲ့ .သားရယ် we are Burmese လေ I prefer maymay ဆိုတော့ သိပ်တော့ဘ၀င်မကျသလို။ ကျောင်းသွားခါနီးတိုင်း သား what are we? ဆိုရင် လက်မောင်းပိန်ပိန်လေးကို မြောက်ပြီး we are Burmese . I am Burmese ဆိုပြီးတော့ သွားရှာတယ်။ ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေက မြန်မာစာမသင်ဖူးတဲ့မေမေ . သားကဘာလို့ မြန်မာစာသပ်သပ်ထပ်သင်ရတာလည်းတဲ့။ မေမေတို့ က မြန်မာတွေလေ သားရယ်. သားမြန်မာလို ကာတွန်းတွေ မဖတ်ချင်ဘူးလားလို့ အလွယ်ကူဆုံးအဖြေတစ်ခုပေးထားခဲ့လိုက်တယ်။ ခုတော့ သားက သူ့သူငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာ မြန်မာလို တော်တာကို ပြုံးနေတတ်ပြီ။ ဒီကိုလာလည်တော့ မြန်မာကာတွန်းလေးကိုဖတ်လိုက် ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေကို ဘာသာပြန်လိုက်နဲ့လုပ်နေတဲ့သားကိုကြည့်ရတာ ကျွန်မကျေနပ်လိုက်တာလေ..
အဓိက အကြောင်းကခုမှ ရေးမှာ
ကျွန်မ အိမ်ထောင်ပြုတာငယ်တယ်လို့ပြောကြသလို ငယ်ရွယ်သူမို့ စိတ်ကလည်း ထက်ခဲ့သလို စိတ်ကလည်းဆတ်ခဲ့တယ်။ ယေက္ခမဆိုတာ ချွေးမ နဲ့ဘယ်တော့မှ မတည့်နိုင်သူလို့လက်ကိုင်ထားခဲ့သူပေါ့။ လိုတာထက်ပိုပီးမပတ်သတ်ခဲ့သလို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှာတွေ ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ သတိထားပီးနေခဲ့သူပေါ့။ ကိုကို က အငယ်ဆုံးသားလေ။ . သူ့အမေက သူ့ကို အသက်ကြီးမှရတာ. ချစ်လိုက်တာလည်းအရမ်းပေါ့။ ချွေးမကငယ်ငယ် ယေက္ခမကကြီးကြီးနဲ့ အဆင်ပြေဖို့ဆိုတာ လွယ်ပါ့မလားလို့တရားသေထင်ခဲ့တာ။ မေမေတို့အိမ်ကို နေ့တိုင်းရောက်ပေမယ့် ယေက္ခမအိမ်ကိုတော့ တစ်လတစ်ခါပဲရောက်တာများတယ်။ ယေက္ခမကြီးက တခြားမြေးတွေနဲ့နေတာလေ။ စီးပွာရေးကို ဦးဆောင်ခဲ့သူ အမျိုးတွေကို သြဇာညောင်းခဲ့သူမို့ နေရာတစ်ကာဝင်ပါမှာသိပ်ကြောက်ခဲ့တယ်။ ကိုကို က အရင်က တူတူနေပေမယ့် အိမ်ထောင်ကျတော့ကျွန်မတို့ အိမ်ခွဲခဲ့ကြတယ်။ တူတူမနေချင်ဘူးလို့ကို အကြောက်အကန်ငြင်းခဲ့တာကိုး ...
ဒီတော့အိမ်မှာ ယေက္ခမရယ် သူ့တူရယ်လက်တိုလက်တောင်းခိုင်ကြတဲ့သူ့မြေးမတစ်ယောက်ပဲကျန်ခဲ့တာပေါ့။
ကျွန်မတို့ အဲ့ဒီ့တုန်းကခွဲလိုက်တဲ့အိမ်က ၃ ထပ်ပဲ ဆိုပါတော့ အောက်ဆုံးထပ်မှာကားထားတယ် ။ ဒုတိယထပ်မှာကျွန်မတို့နေတယ်။ တတိယထပ်မှာတော့ အခန်း ၃ ခန်းသပ်သပ်၇ှိတယ်။ ကြင်စဦးမို့ အဖော်တောင်ခေါ်မထားပါဘူး။ ယေက္ခမကြီးက အိမ်ကြီးကအကျယ်ကြီး အမျိုးတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ခေါ်ထားပါဆိုတော့ကျွန်မစိတ်ကောက်ပြန်ရော။
တစ်ပတ်ကို ၃ ခါ ယုံကြည်ရတဲ့ အမကြီးလာပီး အိမ်ကိစ္စတွေ လုပ်ကိုင်ပေးတယ်။ ဗီဒိုတစ်ခုကလွဲရင် အိပ်ခန်းထဲက အိပ်ရာခင်းကအစသူပဲဝင်လဲသွားပေးတာပေါ့လေ။ ကြင်စဦးဆိုပေမယ့် ထစ်ကနဲဆိုစိတ်ကောက်လိုက် စကားများလိုက်ပေါ့။ကိုကိုက သူ့အမေကို အိမ်ကိုခေါ်နေပါရစေတဲ့ ..သူ့အမေအိမ်မှာ မနေချင်ဘူးဆိုရင် ကိုယ်တို့အိမ် အမေ့ကိုခေါ်နေရအောင်တဲ့. တောင်းဆိုလာလိုက်တာ တစ်နှစ်တိတိ။
ကျွန်မ ကလည်း အဲ့လိုပြောတိုင်းစိတ်ကောက်တယ်။ မနေချင်ဘူးဆိုတာကြောင့် ကိုကို့မှာ စိတ်ညစ်ခဲ့ရတယ်ထင်ပါတယ်။ သိတာပေါ့။
ကျွန်မကိုယ်ဝန်ရင့်လာတော့ ယေက္ခမကြီးက အညာစာတွေ ချက်ပြုတ်ပြီး ချိုင့်ကြီးချိုင့်ငယ်နဲ့ပို့လည်း ကျွန်မကတော့ တုတ်တုတ်မလှုပ် ကိုယ့်မေမေမှ ကိုယ့်မေမေ။
သားကိုမွေးတဲ့အချိန်မှာလေ ကျွန်မမိခင်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ ငိုမိတယ်ပျော်လွန်းလို့ပေါ့နော်..
နောက်တော့သားကိုကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းနဲ့ ဆေးရုံကနေ ဆင်းမယ့်နေ့မှာပဲ အမေကြီးကိုခေါ်ထားရအောင်လေလို့ ပြောလိုက်တယ် ။ ကိုကိုက ပြုံးပြီး ကျွန်မကိုကြည့်နေတယ်။ အော် ကျွန်မယေက္ခမ ကြီး သူလည်း သူ့သားအငယ်ဆုံးချစ်ရှာမှာပဲ တူတူနေချင်ရှာမှာပဲလို့။
သားက ခုကျွန်မကို သိပ်ချစ်တယ်။ ၄ နှစ်သား ၅ နှစ်သားကတည်းက ကျွန်မကို ဆိုသိပ်လုပ်ပေးချင်တယ။် ကျွန်မ လက်မောင်းကို ညှစ်ညှစ်ပြီး အသည်းယားတဲ့ပုံ ကျွန်မက သူ့ပါးကို ကိုက်မယ်ဆိုရင် ကိုက်လေမေမေ မနာစေနဲ့နော်တဲ့။
သူ့ရင်ခွင်သေးသေးထဲကျွန်မ ခေါင်းထည့်ပြီးဝင်ရင် သွားကြီးဖြဲပြီးရီတယ်။ ရှက်နေတယ်ထင့်ပါ့။
ကိုကိုလည်း သူ့အမေကြီးကိုသိပ်ချစ်မှာပဲ။ တူတူနေရတဲ့သူတို့သားအမိကိုတွေ့တော့ကျွန်မလည်းပျော်တယ်။ အမေဆိုတာ သမီးနဲ့ပဲ နေချင်တာ။ ခု ချွေးမနဲ့လာနေတာ ကျွန်မ ဂုဏ်ယူတယ်။ သူဟာသူ့ သားကိုချစ်တော့ ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ထက်တဲ့အမျိုးသမီးကြီး ခုချိန်ထိ အမျိုးတွေပေါ် သြဇာညောင်းနေပါစေ သူ့သားနဲ့ပတ်သတ်ရင် သူက ဒုတိယနေရာမှာနေတယ်။
ကျွန်မ လည်းပဲ သားက တစ်ချိန်ချိန်မှာ သားချစ်သူပါမေမေလို့ မိတ်ဆက်ပေးလာခဲ့ရင် ကျေနပ်စွာ ကျွန်မဟာသားအတွက်ပထမဆိုတဲ့နေရာကနေ ဒုတိယနေရာကို ဆင်းပေးဖို့ စိတ်ကို ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။
သားကိုသူတို့ကျောင်းကကောင်မလေးက သားကိုလိုက်နမ်းတယ်။သားက အနမ်းမခံတော့ ရိုက်လိုက်တာမြင်ရတော့စိတ်ထဲမကောင်းဘူး။ သားဘာလို့ပြန်မလုပ်တာလည်းလို့မေးတော့ သားက ကရာတေးသမားလေ (အဲ့အချိန် ၆ နှစ်) ရီချင်လိုက်တာအရမ်း။
သားပြန်ကစ်ရင် သူခံသွားရမှာပေါ့ မိန်းကလေးမို့ခွင့်လွတ်လိုက်တယ်မေမေတဲ့...
တစ်ချိန်မှာ မိန်းကလေးမို့လို့ဆိုပြီးသည်းခံပါများရင် ရောင့်တတ်လာတတ်တဲ့မိန်းမတွေရဲ့ သဘောကိုလည်းသားကို ကျွန်မ သင်ပေးရပါအုန်းမယ်။
၃ လပိုင်းရန်ကုန်ပြန်တုန်းက အပြင်သွားခါနီးရင် စကဒ်ကလည်းတိုတိုလေးကွာလို့ မေမေရာလို့ပြောတတ်တဲ့ သား။ သားသူငယ်ချင်းတွေက စကဒ်အောက်မှာ ဘောင်းဘီရှည်တစ်ထပ်နဲ့လှတယ်မေမေ မေမေရော
၀တ်ပါလားလို့ဆိုတတ်တဲ့သေးတယ်.။ သူ့သူငယ်ချင်းပန်တဲ့ဘီးကုတ်လိုမျိုး သူ့အဖွားကို ၀ယ်ခိုင်းပြီး မေမေဒါလေး
မေမေက သားတီချယ်လို မချောဘူးနော် ဒါပေမယ့်သားကတော့သိပ်ချစ်တာပဲ လို့ပြောတတ်တဲ့သားရဲ့စကားတွေနဲ့ အားတွေဖြစ်နေမိပါတယ်။ ဘ၀ရဲံ့အရေးပါဆုံးယေကျာ်းတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့သားနဲ့ ကျွန်မအမြန်ဆုံးပြန်တွေ့ချင်နေပြီ..
သားရဲ့ဂီတ၀ါသနာက Drumတီးချင်တယ်တဲ့။ သားက အခုတော့အတော်ပိန်တယ်။ အစားသောက်ချေးများလွန်းလို့တဲ့....
ကျွန်မဟာ အသက်၂၀ မပြည့်ခင်မှာ ဂျပန်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုခြေချခွင့် ပညာသင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ကျေူးဇူးနဲ့ နိုင်ငံခြားခဏခဏသွားခွင့်ရခဲ့တယ်။
ကျွန်မရဲ့ခလေးတွေကို နိုင်ငံခြားပုံစံအတိုင်းလည်းမြေတောင်မမြောက်ဘူး။ လုံးလုံးမြန်မာပုံစံနဲ့လည်းမြေတောင်မမြောက်ဘူးလို့ ရင်ထဲမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်။ကျွန်မဘယ်အတိုင်းတာထိ အောင်မြင်စွာ ခလေးတွေကို သွန်သင်နိုင်မလည်းဆိုတာ သူတို့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလည်းဆိုတာကတော့ ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ် မယုံကြည်ရဲတာတော့အမှန်.
Posted by ကြည်ကြည် at 3:37 AM
အင်္ဂါဟူး September 5, 2011 at 4:00 AM
ဒီလိုကျတော့လည်း တစ်ကယ့်သားသည် မိခင်ကြီးအတိုင်းပဲ.... မေတ္တာတရားများ အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။
သားလေးက အမေတူရုပ်နော်...။ ဟုတ်လား။
စူးနွယ်လေး September 5, 2011 at 4:18 AM
ကျွန်မရဲ့ခလေးတွေကို နိုင်ငံခြားပုံစံအတိုင်းလည်းမြေတောင်မမြောက်ဘူး။ လုံးလုံးမြန်မာပုံစံနဲ့လည်းမြေတောင်မမြောက်ဘူးလို့ ရင်ထဲမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်.......... အဲဒီမူ ကောင်းတယ် ကြည်ကြည်ရေ...။ မလျော့မတင်းလေးပေါ့နော် ကြိုက်တယ်။
ငယ်ငယ်လေးနဲ့သားက သူ့အမေကို ချစ်တတ်လိုက်တာ...
လင်္ကာ September 5, 2011 at 4:40 AM
ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်ဗျို့ ။ စာရေးကောင်းပဲ။
ညိမ်းနိုင် September 5, 2011 at 5:48 AM
ချိုမြိန်နေလိုက်တာ....၊သားသားကိုအကြောင်းပြုလို့ ယောက္ခမကြီးနဲ့ ခင်ပွန်း
သည်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို နားလည်မှုပေးနိုင်ပုံလေးက လှလို့....၊သဘောကျ
မြတ်ကြည် September 5, 2011 at 5:49 AM
ဒါလေးဖတ်ပြီး ကိုယ့်ရှေ့ရေးကို တွေးမိတယ်။ ညီမလည်း ယောက္ခမနဲ့ အတူနေရမှာ ကြောက်တယ်အစ်မ။ သူ့အမေက ညီမ ကို ချစ်တော့ချစ်ရှာပါတယ်။ ယူပြီးရင် အိမ်ခွဲနေချင်တယ်။ သူလည်း အငယ်ဆုံးသားဆိုတော့ မပြောတတ်သေးဘူး။
Anonymous September 5, 2011 at 6:01 AM
Good post ....Kyi.This is nature when you have son to look back mother in law's heart.We are mother and wife.So I've simpathy to both mother and wife.Wishing you to be with beloved one soon.
Kay September 5, 2011 at 6:16 AM
အလြိုလေး သားလေး တယောက် လိုချင်တယ်။
ဘယ့်နှယ့် we are Burmese ရ မလဲ..
သားရေ မေမေ တို့က..ဗမာလေး လုပ်ပါ..ါ်)
သား အရမ်းချစ်တဲ့ တို့ အမ တွေ ပေးဖတ်လိုက်အုံမ်းယ..
အပြုံးပန်း September 5, 2011 at 6:21 AM
ကြည်ကြည် September 5, 2011 at 6:22 AM
ကျေးဇူးပါ ရှင် .
မကေမပြောပေမယ့် burmese ကနေ Burmese လို့ပြင်ဆင်ပြီး ...း)...
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) September 5, 2011 at 6:50 AM
ဘလော့ဂါအသစ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတာလဲဗျ ...
ချယ်ရီမြေ September 5, 2011 at 8:19 AM
အသက် ၂၀-အရွယ်ကတည်းက ပြည်ပရောက်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်လေးတွေအတွက် မြန်မာသွေးအပြည့်ရှိတယ်ဆိုသိရတော့ တကယ်လေးစားသွားပါတယ် ကြည်ကြည်...
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! September 5, 2011 at 11:10 AM
ကြည်နူးစ၇ာ မိသားစုဘဝလေးဖတ်ရတာ စိတ်ကျေနပ်စရာလေးပါပဲမမရေ...ဘလော့အသစ်လေးဆိုတော့ လည်လည်မကြာခဏရောက်ဖြစ်တော့မယ်...မမရဲ့ အရင်ဘလော့လေးက ညီမလေး လာရင်ကျော်ခွမှရောက်တာလေ..ခုတော့ကျော်စရာမလိုတော့ဘူး မိုက်ပ....:)
PhyoPhyo September 5, 2011 at 11:17 AM
အမေ က ရင်ခွင်ထဲဝင်လို့ သွားကြီးဖြဲပြီးရယ်တယ်ဆိုလို့ သဘောကျလိုက်တာ။
သဘောကျလိုက်တာ ရေးထားတာလေ။ အချစ်ဆုံးအမျိုးသားလေးအကြောင်း
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) September 5, 2011 at 1:42 PM
သားဦးရမှဘဲ ယောက်ခမကို နားလည်ပေးတတ်တယ်ပေါ့။း))
ကြည်ကြည် September 5, 2011 at 9:17 PM
တပည့်တော် တောက်လျှောက်ဆက်တိုက်တော့ မနေဖူးပါဘူး ဘုရား ..
မဒမ်ကိုး September 5, 2011 at 10:02 PM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) September 6, 2011 at 11:35 PM
ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ထုံမွန်းနေတဲ့ မေတ္တာစာလေးပါဘဲ မကြည်ကြည်
ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ ပြီးတော့လည်း အမေနဲ့သားရဲ့ကြားက ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အားကျမိတယ်။ လေးစားမိတယ်
kokoseinygn September 8, 2011 at 4:26 AM
သားတွေက အမေချစ်..သမီးတွေက အဖေချစ်တဲ့
rose of sharon September 8, 2011 at 5:19 AM
ချစ်စရာကောင်းတဲ့သားလေးနဲ့ လေးစားစရာကောင်းတဲ့မေမေ... နှစ်ယောက်လုံးချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ... :)
Anonymous September 12, 2011 at 12:35 AM
သားလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ ကြည်နူးဖို့ကောင်းတဲ့ ပိုစ့်လေးပါ။
သက်ဝေ December 8, 2011 at 10:30 PM
တဦးတည်းသော သားရဲ့ မေမေ...
ဘဝတူတွေမို့ နားလည်တယ်...း)
Anonymous January 8, 2012 at 2:26 PM
i am touched! nice article :)
plus...your son is adorable and smart as well
ကန်ဆိုင်းက အစားအစာများ (kansai အစားအစာ)
နာဂါနို Nagano Trip တောင်ပေါ်ပြည်နယ်နာဂါနို